Ihe 10 ị ga-ama tupu ị na-ewere DMAA | AASraw
Ihe 10 ị ga-ama tupu gị ewere DMAA
/blog/gallery/ Ihe 10 ị ga-ama tupu gị ewere DMAA
Ihe na 11 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
DMAA bụ ọgwụ a na-emepụta nke na-enyere aka na ụlọ ahụ, na-enwusi abụba anụ ahụ nakwa maka mmelite nke ncheta oge dị mkpirikpi na imegharị ihe. Nke a na-agụnye uru DMAA na usoro mmetụta nke 1,3-dimethylamylamine.
Kedu ihe DMAA?
nghọta Kedu is DMAA kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ndị ọ bụla arụmọrụ na-eme ka onye na-eme egwuregwu nwee ike mesie ike tupu ị gbadata iji mgbakwụnye ahụ mee ihe. DMAA nke bụ ụdị dị mkpirikpi maka chemical dimethylamylamine bụ ọgwụ a na-ekwenye na ọ bụ ihe si na geranium mmanụ. Otú ọ dị, site na nyocha, e guzobewo ya 1, 3 dimethylamylamine a na-emepụta ihe na-emepụta n'ime ụlọ akwụkwọ nyocha.
A na-akpọkwa 1,3 DMAA, ọgwụ ahụ na-ejikọta ụdị ihe ahụ na germanium nwetara ọgwụ. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji chee na DMAA so n'otu ọgwụ ahụ. Ihe mgbatị DMAA bụ okwu dịka ndị na-eji mgbakwụnye ahụ mee ihe dị ka ndị na-achọ ịmalite ịmalite ịmalite oge ha na-egbu oge.
ULUAA ugbo bu nke mbu bu Eli Lilly na Company na 1944. Ọgwụ ọjọọ a na-eji ọgwụgwọ eme ihe dị ka onye na-abaghị uru. A na-eji ọgwụ ahụ eme ihe maka nzube a dị ka achọtara ya iji nweta nsonaazụ yiri ya iji ephedrine na pseudoephedrine.
Na mbụ, ọtụtụ ndị kweere na DMAA sitere na rose geranium mmanụ. N'ihi ya, a na-ahụkarị ọtụtụ ndị ọrụ na-emepụta Mgbakwunye DMAA egosi ihe osise nke rose geranium osisi akụkụ dịka mgbọrọgwụ na azuokokoosisi. Otú ọ dị, n'agbanyeghị nkwenkwe nkwenkwe a ogologo oge, nyocha ụlọ nchọpụta na DMAA egosiwo na ọ bụghị.
E gosipụtara na e nwetara DMAA na laabu na ọ bụghị dị ka eke dị ka a kwenyere kemgbe ogologo oge. Mgbe mmeghe mbụ ya n'ahịa ahụ, a na-ere ọgwụ ahụ n'ụzọ zuru oke ka ndị na-eme egwuregwu nwere mmasị na ya. Nke a bụ ruo 1983 mgbe e wepụrụ mmeju ahụ na ahịa ahụ.
A nabatara mpempe akwụkwọ ahụ site na azọrọ na ọ dịghị mma maka ire ere n'ụlọ ọgwụ. Ntuchi iwu a mere ka ụkọ ọgwụ ghara ịgbanye ezie na ọ ka na-ere ahịa na ahịa ojii. A maliteghachiri ahia nke DMAA na 2006 mgbe ọ gbanyere aha n'okpuru aha ọhụrụ, Geranamine.
Enwunyeghi naanị DMAA. Kama nke ahụ, e tinyere ya na mgbakwunye ihe nhụjuanya ma bụrụ nke a na-ekewa dị ka ọgwụ na-eme egwuregwu mmezi. Ntughari nke ọgwụ na ndi mmadu na-acho ndi mmadu choro ka ha nwekwuo esemokwu banyere nchekwa nke ojiji iji mee ka onye na eme egwuregwu nwuo.
Nchegbu ahụ dị oke egwu na Nri na Ọgwụ Na - ahụ Maka Ọgwụ (FDA) nwere ike ịjụ ndị na - eme ihe mgbakwunye iji gosipụta na o kwesịrị ekwesị iji mee ihe n'emeghị ka egwu na - akpata. Mba ndị dị ka Canada na-ebute nchegbu banyere nzube ya, a machibidokwa ya iwu.
Ọ naghị adị mma maka ndị na-eme egwuregwu n'egwuregwu dịka na 2010, na World Anti-Doping Agency na-ebipụta ya na nso nso a dị ka ihe na-emerụ ahụ nke a machibidoro iji mee ihe. Ya mere, onye na-egwu egwuregwu na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe nwere ike bụrụ iwu machibidoro ikere òkè na egwuregwu asọmpi. N'ihi nkwurịta okwu metụtara ya, a machibidoro DMAA na agha United States.
Emeela ka ihe na-eme ngwa ngwa wepuo ụlọ ahịa ndị agha iji chịkwaa ya. Na New Zealand, a gaghị ekwekwa ọgwụ ahụ. A na-ewerekwa ya dịka iwu na-akwadoghị na United States ugbu a.
Kedu ihe eji eji DMAA?
Usoro arụ ọrụ nke, DMAA adịghị egosi. Otú ọ dị, a na-eche ọgwụ ahụ iji gosipụta ihe nke adrenaline. Na-eji ya, DMAA na-emetụta usoro nhụjuanya bụ isi.
A maara ọgwụ ahụ iji mepụta mkpali dị elu nke dịka iji caffeine. Otú ọ dị, usoro nke DMAA dị iche na nke caffeine. Mgbe e mere ya, DMAA na-eme ka mmepụta nke noradrenaline bụ hormone nke a na-arụ ọrụ n'oge nsogbu ma ọ bụ ụjọ.
A na-emepụta hormone ahụ na olulu mmiri ndị dị n'elu akụrụ. Mgbe a tọhapụrụ, a na-ekesa hormon ahụ n'ime ọbara, nke a na-ebutekwa mmụba nke obi.
Ntupụta nke noradrenaline na-emekwa ka usoro ahụ dị na ya kwụsị ịhapụ glucose site na glycogen. Nke a na - eme ka ahụ ike dịkwuo n'ahụ ahụ, na nke a bụ ihe ọtụtụ ndị na - eme egwuregwu chọrọ tupu mgbatị. Iji DMAA eme ihe ga - edugakwa n'ime ụfọdụ akụkụ dịka ịkpachara anya, mkpali na iweghachi oge.
Nke a bụ otu n'ime isi ihe kpatara ndị eji eme egwuregwu na-eji DMAA eme ihe tupu ha amalite usoro mgbatị. Ọgwụ ahụ na-eme ka mmetụta nke ike dị ukwuu na-eme ka onye na-eme egwuregwu chọrọ itinye aka na ọrụ ga-eri ume ike. Iji DMAA emeela ka ndị na-eme egwuregwu kwụsị icheta ike nke na-abịa na ihe caffeine a na-ejikarị eme ihe.
DMAA bụ mmelite nke caffeine, ndị na-eji ya ruo ogologo oge nwere ike ịmalite ịmalite ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Nke a pụtara na njikwa ejiri ejikwa ihe dị mkpa. Mgbe a na-eji ya eme ihe, ọ na-eme ka ụbụrụ mee ka enwe mmetụta nke ume ike.
Nnukwu elu mgbali elu na-eso nke a. Dika ihe a na-eme, ọtụtụ ndị na-emekarị ọgwụ ọjọọ. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ ahụ eme ihe dị mma n'ahụ ha. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe dị mma nke DMAA:
1. Ọkụ nke abụba
N'ikpeazụ, ahụ mmadụ na-agbachapụ abụba ndị ahụ. Otú ọ dị, nke a nwere ike ime na ngwa ngwa karịa ihe na-achọsi ike. Iji mee ka usoro ahụ gbanwee, eji ihe mgbakwunye eme ihe site na arụmọrụ ndị na-eme egwuregwu. Ọtụtụ n'ime ihe mgbakwunye ndị a bụ steroid dị ka Nootropics.
Iji mgbakwunye ndị dị otú ahụ meziwanye ọnụego ọkụ. DMAA dị irè dị ka ihe mgbakwunyere ndị ọzọ a maara na ọkụ nke oke abụba. A na-ahazi ọtụtụ mmemme iji rụpụta ọtụtụ ihe, isi n'etiti ha bụ Mbelata nke abụba anụ ahụ nke na-enye ahụ ahụ ihe na-adịghị mma.
Ngwunye oke na-etinyekwa ihe ize ndụ maka ịkwa mma nke onye na-eme egwuregwu dịka ọnọdụ dị otú a nwere ike ime ka ọbara ọbara sie ike. Mgbe nke a mere, a ga-enwe ntakịrị oxygen n'ime ọbara na ọrụ zuru oke nke onye ahụ ga-emetụta ya. Ugbu a igodo iji zere ụdị ọnọdụ a bụ site n'iji ọgwụ dịka DMAA nke na-enye ahụ gị dị elu nke ike.
Ozugbo ike siri ike, onye ọrụ ahụ na-agbanye aka na-eme ihe ndị ga-erepịa ike ahụ, n'ihi ya kwa, a ga-enwe mbelata nke abụba anụ ahụ na-adịghị emerụ ahụ ma ọ bụ nke na-adịghị ahụkebe. A chọpụtala ọgwụ dị oke irè n'ọkụ anụ ahụ , nke a dịkwa mkpa maka ndị na-eme egwuregwu na-achọ iji nweta nke a karịsịa mgbe a na-egbu ha. Ọdịdị nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-enweghị njedebe.
Mgbe e jikọtara ya na ihe na-akpali akpali dị ka caffeine, a chọpụtala DMAA iji melite ọrụ ahụ metabolic site na 35%. Nke a, n'aka nke ya, na-enyere aka melite ọnụ ọgụgụ na-ere ọkụ site na nnukwu ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama. Ọgwụ ahụ na - arụ ọrụ site n'ịhụ na ọ na - emepụta abụba ọkụ tupu oge tupu aru ahụ apụta na ọ ga-eme.
Dika ihe DMAA jikotara ya na etiti akwara nke oma, ogwu ahu na achota na o na eme ihe a karia. Na mkpali, CNS na-emeghachi omume site na mmegharị mmegharị na-eme ka abụba na-ere ọkụ. Ya mere, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị iji tụnyere DMAA na ihe ndị ọzọ na-ere ọkụ na-ere ọkụ n'ahịa.
2. Ewu Ụlọ
Ihe kachasị mkpa tupu mgbatị ahụ bụ ike. Ọ bụ ya mere ị ga-eji leba anya n'ihe ga-eme ka ị nweta ume ndị a iji mee ka ị na-aga n'ihu. Mesomorph pre workout dmaa
bụ ụdị ihe inye onye na-ewu ahụ isi kwesiri isi na-amalite na ị chọrọ ime ka nlekọta ahụ gaa nke ọma.
Dịka edepụtara na mbụ, a maara ọgwụ ahụ iji nye mmetụta dịka pseudoephedrine. Ngwurugwu a ga - enweta onye ọrụ a 'ọnọdụ dị elu'. Nke a na-enye onye nwere oke nchekwa ike nke dị mkpa maka mgbatị.
Maka nsonaazụ kachasị mma, a ghaghị ịṅụ ọgwụ na-enye nnukwu ume tupu oge mgbatị. Nke a ga-ewepu onye ọrụ ahụ na ike nke dị na ihe ọ bụla arụmọrụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu chọrọ ka ụbọchị ha malite na ọkwa dị elu. Ọgwụ dị otú ahụ na-eme nke a site n'ime ka otu n'ime usoro ọgwụgwọ anụ ahụ nke ahụ dịrị.
N'elu nri, ọgwụ na-eme ka vasodilation dịkwuo njọ. Nke a bụ usoro nke na-emekarị mgbe enwere oke okpomọkụ na ikuku. Ahụ na-emeghachi omume site n'ịba ụba nke veins. A na-eme nke a iji mee ka ọbara dịkwuo n'ahụ anụ ahụ ka ọ dị mma.
Ọtụtụ ọgwụ ndị na-eme nke ọma na-enwe nitric oxide nke na-akwalite mgbasawanye nke arịa ọbara site na ịmalite vasodilation. Nke a bụ uru bara uru maka onye na-eme egwuregwu, karịsịa n'oge a ihe mgbatị. Ozugbo buru ibu, ebe dị elu maka ịmịba ọbara na-eme nke ọma.
Nke a ga-enye onye na-eme egwuregwu ohere maka ịgbagharị ọbara nke na-adịbeghị tupu ya eji ọgwụ ọjọọ eme ihe. N'ikpeazụ, ọzụzụ siri ike ga-ekwe omume, onye na-eme egwuregwu nwere ọtụtụ ike iji kwalite nkwalite ahụ.
Otú ọ dị, a na-achọta iji DMAA mee ihe na nke a na-emegide ihe ọtụtụ ndị ga-atụ anya banyere ọgwụ na-eme ka arụ ọrụ. Kama ịkwalite vasodilation dị ka ọtụtụ nitric oxide ọgwụ ọjọọ, DMAA na-abụghị. Ọ na - akpata nkwupụta ụda nke na - emekarị n'oge oge mgbe okpomọkụ dị na ikuku dị ala.
N'oge dị otú ahụ, ahụ na-agbasi mbọ ike ịnọgide na-enwe ọnọdụ okpomọkụ, nke a na-akpata site na nkwụsị ọbara si n'elu anụ ahụ pụta. Otú ọ dị, nke a na-eme mgbe usoro ọgwụgwọ dị oke elu ma ghara ịbụ onye na-echegbu onwe ya maka onye na-eme atụmatụ iji DMAA.
3. Na-enyere aka melite ncheta mkpụmkpụ na ọrụ redio
Onye ọ bụla ga-enwe mmasị icheta ihe niile ha chọrọ. Otú ọ dị, nke a adịghị abụkarị ihe dịka ndụ mmadụ na-ezute site n'ọtụtụ ọnọdụ na-eme ka ọ sie ike ka nke a mee. DMAA nwere ike ịbụ mmezi aka na n'ihu a.
Nnyocha nke ndị ọrụ nke mmejupụta a gosipụtara na ndị ahụ metụtara nwere ebe nchekwa dị mkpirikpi karịa tupu iji ya. Ya mere, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ ndị ga-eji ọgwụ ahụ na-ebute nke a, ọ ga-abụrụ dịka ihe ntinye nke njedebe ya. Nke ahụ bụ otu n'ime uru ndị isi na ọtụtụ ndị na-enweta site na iji DMAA ọbụna na nke a na-eme n'enweghị atụmatụ ha.
Omume dị elu na-egosi na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-achọ inweta. Iji DMAA na-eme ka ozu dị nnọọ anya, na ịrụ ọrụ arụ ọrụ a. Nke a pụtara na ndị ọrụ DMAA nọ na-arụsi ọrụ ike karịchaa mgbe ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na asọmpi. Ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ site n'ime ka ọnụ ọgụgụ nke metabolism ahụ dịkwuo elu.
Nke a na - eme ka usoro ahụ dịrị ngwa ngwa karịa nkịtị. A na-ele nke a anya n'ụzọ anụ ahụ site n'inwe onye na-arụsi ọrụ ike na nke anya. Otú ọ dị, nanị ihe na-egbochi ihu a bụ na a na-amachibido ịṅụ ọgwụ na asọmpi.
Ya mere, ọ gaghị ekwe ka iji ya mee ihe na-emegharị emegharị mgbe a na-eme egwuregwu. Otú ọ dị, ndị na-eme egwuregwu na-eji ya eme ihe mgbe a na-eme ihe iji mezuo ngwa ngwa.
Ihe DMAA Na-enye Nchekwa?
Nke a kwesịrị ịbụ nchegbu maka onye ọ bụla na-ekere òkè na egwuregwu asọmpi. Edewo ọgwụ ọjọọ n'etiti ọgwụ ndị na-adịghị eche nche maka nzukọ nke ụwa. Ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nwerechibidoro iji DMAA eme ihe n'ụzọ ụfọdụ. Otú ọ dị, nke a bụ isiokwu nke mepụtara echiche dị iche iche dịgasị iche.
Òtù Na-ahụ maka Nri na Ọgwụ nke United States (FDA) na-atụle ihe mgbakwunye DMAA ka ọ bụrụ ihe nchekwa maka oriri mmadụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ụka na enweghị ozi gbasara ihe DMAA na-eme ka ọ bụrụ ọgwụ dị mma maka iji ya. N'ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ahụ na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha ghara iji ọgwụ ahụ eme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na o nwere ike ibute ha n'ihe ize ndụ.
Otu n'ime isi nchegbu nke FDA bụ ikike nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-akpata vasoconstriction. Nke a na ha na-arụ ụka bụ ngosipụta nke ọbara mgbali elu bụ nke nwere ike mechaa nwụọ ma ọ bụrụ na ọ gaghị edozi ya ngwa ngwa. Mmetụta ndị ọzọ nke iku ume okuku nke nwere ike ịnweta site na iji DMAA gụnyere nsogbu ndị na-eku ume, ihe mgbu obi na oke dị egwu nke ijide.
Dị ka FDA si kwuo, iji ọgwụ ọjọọ eme ihe nwekwara ike ịkpata nsogbu ọrịa na-adịghị na ya n'ihi na ọ na-arụ ọrụ site n'ịkpalite usoro nchebe nke etiti. Nke a nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi na ọ nwere ike ibute ọrịa mkpọnwụ na nsogbu ndị ọzọ dị egwu.
FDA agbasiri ike n'igosi na DMAA nwere ihe mgbakwunye na-ekpochapụ site n'ahịa ahụ. Isi n'etiti usoro dị iche iche ha na-eme bụ ịnye ọgwụ chemists na akwụkwọ ozi ndị na-eme ka ha ghara ịzụta DMAA nwere ihe mgbakwunye. Ọ bụrụ na ha na-ahụ ihe mgbakwunye ndị ahụ na shelves, ụlọ ọrụ ahụ jụrụ ndị na-ere ya ka ha bibie ha ma zere ime ndokwa ọzọ site n'aka ndị na-emepụta ihe.
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị ọrụ na-akwado. Mgbasa ozi a malitere na 2012, ọ na-enwekwa mmetụta dị ka ọ dị ugbu a ịzụta ihe mgbakwunye DMAA dị ala. Enwekwara ihe kpatara ụfọdụ ụlọ ọrụ ji emepụta DMAA ọbụna mgbe a jụrụ ha ka ha kwụsị FDA.
A gbara àmà dị otú ahụ na 2013 mgbe ụlọ ọrụ a na - akpọ ndị ọrụ US jụrụ ịkwụsị ịmepụta ihe mgbakwunye. FDA kwụsịrị ọrụ ha, ụlọ ọrụ ahụ na-ajụ ajụjụ ahụ ga-ebibi ngwaahịa ndị ahụrịrịrịrịrị na ahịa. Ọnụahịa ha kwadoro atụmatụ maka ihe dị ka $ 8 nde.
Nke a gosiputara ókè ụlọ ọrụ ahụ dị njikere iji hụ na mmepụta nke DMAA ka ọ kwụsịrị ma ọ bụghị otu ọgwụ nke otu ahụ na-ahụ ụmụ amaala mba ahụ. FDA agafewo n'ihu ma depụta aha dị iche iche ndị na-emepụta nwere ike iji gbochie ndị ahịa site n'ịmara na ha na-eji DMAA. Nke a bụ mgbe ụlọ ọrụ ahụ ghọtara na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ ahụ na aha ndị a na-edegharịghị iji gbochie ndị na-azụ ha ka ha mata kpọmkwem ọgwụ ahụ a machibidoro iwu.
Ụfọdụ n'ime aha ndị ahụ e depụtara na ha gụnyere Geranamine na Methylhexanamine. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-egosi na mgbakwunye gụnyere Geranium osisi extracts. Nke a bụ ihe ngosi nke ọnụnọ nke DMAA. FDA dọrọ ndị na-azụ ahịa aka ná ntị ka ha ghara ịma ihe mgbakwunye ọ bụla nke gụnyere extracts sitere na Geranium.
Mgbochi ndị ahụ yiri na mba ndị ọzọ dịka Canada na New Zealand na ọtụtụ ndị ọzọ n'ụwa. Nchegbu kachasị na ya bụ mmetụta ya na sistemụ respiratory. Ụlọ ọrụ na-emegide mgbochi nke ụwa edepụtawokwa DMAA ntụ ntụ n'etiti ọgwụ ndị na-adịghị mma maka iji mmadụ eme ihe. Nke a pụtara na iwu machibidoro ya maka ndị na-eme egwuregwu na-etinye aka na asọmpi dị ka iko ụwa.
Enwere ike iji ya mee ihe na ụfọdụ asọmpi karịsịa na obere dosages nke dị n'ime ọkwa. Otú ọ dị, ọ na-adị mma mgbe niile ịmara banyere mgbochi nke asọmpi nke onye na-ekere tupu ịṅụ ọgwụ iji zere ibute na nsogbu.
Isi okwu banyere ma DMAA dị nchebe na-emegharị ọzọ mgbe ikpe dị iche iche dị n'etiti FDA na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ ndị ahụ nọgidere na-ekwusi ike na ọ dịghị nsogbu ọ bụla na-ere ahịa mgbakpọ ahụ. Otu nnyocha natara na DMAA bụ n'ezie ngwaahịa nke Geranium osisi na nke a emegide FDA.
Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ enyeghị ihe àmà ọ bụla na-akwado iji kwupụta azịza ya na a na-enweta ọgwụ ahụ. Dị ka onye dọkịta si nyochaa nkwupụta nke enweghị nchekasị site na iji mgbakwụnye ahụ eme ihe, ọ gaghị enwe mmetụta ọ bụla dị njọ na onye ahụ dị mma nke ji mgbatị ahụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Ndị ọgwụ ahụ kwusiri ike na ọnụ ọgụgụ DMAA dị na mgbakwunye ọrụ mgbatị ahụ bụ ihe dị n'okpuru ihe a na-ewere dị ka nsí maka iji mmadụ eme ihe.
Na nyocha ọzọ, ndị na-eto eto bụ ndị na-eji DMAA eme ihe dị ka ihe na-akpali akpali n'oge nnọkọ nwere ike ịmalite ịrịa ọrịa nkịtị, strok stroke. Nke a mere ka nkwenye FDA dịkwuo ike banyere nchekwa nke iji DMAA na mgbakwunye. Otú ọ dị, nchọpụta ọzọ mere ka ihe àmà FDA kwadoro ya mgbe ọ chọpụtara na ndị na-eto eto nọ na ajụjụ ejiri ọgwụ dị ukwuu nke ọgwụ ahụ mee ihe.
E kpugheere ha na ha na-aṅụ ọgwụ na onye ọ bụla nwere gburugburu 600mg nke ihe na-arụ ọrụ. Nke a dị nnọọ elu dị ka ọ dị n'ọnọdụ dị, ma ego kachasị atụ anya na gburugburu 60mg na ngwugwu mgbakwunye. Nke a pụtara na ndị a na-eto eto riri ugboro iri nke ihe ha kwesịrị iji.
N'okwu dị iche iche, site na echiche sayensị, a pụrụ iji ọgwụ ahụ dị ka ọgwụ na-egbochi ịmịnye ọgwụ nke ọma ma ọ bụrụ na e weere ọgwụ ndị kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na a na-ewere DMAA na dosages nke dị elu karịa 75mg, enwere ike ịrị elu mgbali elu na ọkwa na-achọghị, yana a ga-atụle ya. Ọ bụ nanị ndị mmadụ na-enweghị akụkọ ihe mere eme nke ọbara mgbali elu dị n'oge gara aga ga-eji ọgwụ ahụ mee ihe iji mee ka ọnọdụ ahụ dịkwuo njọ.
Ozokwa, ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-amịpụta ọgwụ ahụ anabataghị FDA, ha nwere nkọwa banyere nchekwa nke DMAA. N'ihi ya, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ịme ka nchegbu ha kwụsị ma nọgide na-azụ ihe ntinye site na ahịa ojii. Gị na onye dọkịta na-ekwurịta okwu tupu iji ejiji DMAA emee ihe dị mkpa.
Nke a ga - achọpụta na achọtara ihe ndị achọrọ na - enweghị mmerụ ahụike nke onye ọrụ ahụ.
Kedu ihe ị ga-achọ ịma tupu ewere ihe mgbakwunye DMAA?
E nwere ọtụtụ ihe ọmụma na arụmọrụ ọ bụla ga-eme ka onye na-eme egwuregwu nwee ike ịbịakwute okwu tupu tupu edozi ya na DMAA dị ka ọgwụ ịhọrọ ịṅụ ọgwụ tupu oge ahụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-agụnye mmetụta ndị mmadụ nwere ike izute nakwa uru ị ga-enweta site n'iji ya eme ihe.
Isi n'etiti ihe ndị ị chọrọ ịma bụ na mmetụta nke ịṅụ ọgwụ a yiri ihe nwere ike ịnweta mgbe e jiri cocaine na methamphetamine. Nke a pụtara na ihe gbasara nke a nwere ike ịmepụta ahụ riri ahụ dị elu karịa na ọ dị elu karịa ihe kachasị ike. Ị kwesịrị ịma na ị nwere ike imepe ahụ gị ka ọ bụrụ otu n'ime nsogbu kachasị sie ike ka ị na-agbalị imezi ahụike gị.
Iji zere ohere ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ị kwesịrị ị hụ na ị na-agbaso ihe dọkịta gị kwenyere na ọ kacha dịrị gị mma. Ọ dịkwa oke mkpa ịghọta na iji ọgwụ eme ihe ga-emetụta usoro nchebe nke etiti ahụ kpọmkwem. DMAA na-eme ihe dị ka caffeine site na ime ka ọnụ ọgụgụ CNS na-eme ka ahụ gị dị nnọọ njikere.
Ọgwụ dị ike karịa caffeine ma nye ahụ gị ume nke na ị chọrọ ịmalite oge mgbatị gị na ọkwa dị elu. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka ị lelee usoro ọgwụgwọ ị na-eri ka ọgwụ ahụ na-emetụta otu n'ime akụkụ ahụ kachasị emetụ n'ahụ. N'ọnọdụ a kọrọ na 2012, ìgwè ndị na-eto eto malitere iji ọgwụ ahụ eme ihe n'oge nnọkọ oriri.
Ha riri ugboro iri karịa ihe dị mkpa maka usoro nhazi oge. Ebumnuche bụ 'elu' ngwa ngwa, nke a gbanwee ka ọ bụrụ nkwụsị ha. Ọgwụ ọjọọ metụrụ usoro nchebe ha nke etiti, ọtụtụ n'ime ha chọpụtakwara na ha nwere ọrịa ụbụrụ nke na-arịa ọrịa.
Ndị ọrụ kwesịkwara ịghọta na n'adịghị ka ọtụtụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ nke na-agụnye nitric oxide, DMAA na-akpata vasoconstriction nke veins. Nke a pụtara na onye were ụyọkọ DMAA ga-ejikarị arịa ọbara karịa onye ọzọ. Ọnọdụ a nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ọ na - eme onye nwere nsogbu ọbara mgbali elu dịka ọ ga - eme ka ọrịa ahụ dị njọ.
Ya mere, onye na-arịa ọbara mgbali elu kwesịrị izere iji DMAA.
Iji ọgwụ eme ihe nwere ike ime ka ọbara na-arịwanye elu na mmetụta dị elu. Ịgbakwunye mmeju ahụ na arụmọrụ ndị ọzọ na-eme ka ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịdị ize ndụ dị ka nke a nwere ike ime ka ahụ gị nwee ume dị ukwuu nke ị na-agaghị emeli. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghọta na DMAA bụ isi mgbatị mmemme nke a na-ekwesịghị iji maka nzube ọ bụla.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-eji ya eme ihe dị ka ọgwụ na-eme ka mmekọahụ nwee mmetọ, ma nke a dị njọ. Ọ nwere ike iduga na ịbanye na coma ma ọ bụrụ na emegbu ma nke a kwesịrị ịdị na-atụle mgbe niile.
DMAA tupu workout na nmetụta mmetụta nke mbụ
Mgbe e mechara DMAA, ụfọdụ ndị nwere ahụmahụ ndị metụtara mgbatị na-agụnye ọgbụgba na vomiting. Nke a bụ ihe nkịtị, ọ pụtara na ahụ gị nwere ike ịzaghachi ọgwụ ọjọọ. Otú ọ dị, ịme agbọ na ọgbụ mmiri nwere ike ọ gaghị abụ kpọmkwem ihe DMAA ji eme ihe. Chemical dị na ntinye nke nwere ihe ndị ọzọ, ha nwekwara ike ịbụ ihe na-akpata vomiting.
E wezụga nke ahụ, ihe ndị ọzọ metụtara mgbatị na-ejikarị ihe eji eme ihe dị ka DMAA. Ndị dị otú a gụnyere:
Emebido ihe eji ehi ura
Ime na ime nwa
Ọtụtụ ihe mgbakwunye na-esite na nchịkọta nke ndị a napụrụ site n'iji ya eme ihe, na isi n'etiti ha gụnyere nne na-agba ara na ndị dị ime. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na, n'ihe gbasara ndị inyom dị ime, iji ọgwụ ọjọọ eme ihe nwere ike imetụta ọganihu nwa ọhụrụ a na-amụbeghị amụ. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọtụtụ ozi dị maka iji ọtụtụ ihe mgbakwunye na ndị mmadụ dị iche iche, nke a abụghị ihe gbasara ọgwụ ọgwụ DMAA.
E nwere ezigbo ihe ọmụma banyere nke a. Ya mere, ndị na-ezube iji DMAA dị ka ọgwụ na-eme tupu ha emee ma ọ dị ime ma ọ bụ ịkwa ụra kwesịrị izere ime nke ahụ n'ihi na enweghi ntakịrị ihe ọmụma gbasara mmetụta ndị a tụrụ anya ya. Nke a ga-abụ ụzọ dị mma karịa ịkọwa onye ọrụ ahụ ka ọ bụrụ mmetụta ha na-echetụbeghị.
A na-ekewa ọgwụ DMAA dị ka ihe na-akpali akpali. Nke a pụtara na ọ ga-emetụta n'ụzọ dị njọ na o nwere ike ịwa ịwa ahụ nke ọma karịsịa mgbe e were ya tupu ịmalite ọrụ ahụ. Ya mere iji zere ọnọdụ dị otú ahụ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịghara iji ya mee ihe ma ọ bụrụ na ị kwadoro maka ịwa ahụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere ịnweta ihe ọbụla na-akpali tupu ịwa ahụ. Nke a bụ iji zere ọbara mgbali elu nke nwere ike ịnwụ n'oge ịwa ahụ.
Nke a bụ mmetụta kasị pụta ìhè nke dị na ndị na-eji DMAA. Nke a bụ n'ihi na ọgwụ bụ ihe na-akpali akpali na ọtụtụ ọgwụ ọjọọ na nke a na-amara na-ebute ọbara mgbali elu karịsịa mgbe a na-emegbu ya. DMAA na - eduga na warara nke arịa ọbara, nke a na - eme ka ọbara na - agba ọsọ ọsọ ọsọ karịa ka ọ na - akpata ọbara mgbali elu.
N'ihi mmetụta a dị n'akụkụ a, a chọpụtawo iji DMAA eme ka ọrịa ndị ọzọ dịka ụbụrụ strok. N'ihe banyere mgbaàmà a, onye ọrụ kwesịrị izere ịṅụ ọgwụ ozugbo. Nke a bụ n'ihi na ịnọgide na-eji ya eme ihe ga-eme ka ihe mgbaàmà ahụ dịkwuo elu ma nwee ike ibute ọnwụ.
Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume igbochi ọbara mgbali elu site na njikwa ejiri. Nke a ga - enye nsonaazụ kachasị mma ma ọ bụrụ na ndị ọkachamara ga-anwale iji chọpụta ihe kwesịrị ekwesị.
Ogologo oge ole ka DMAA nọ na usoro gị?
Ụzọ kachasị mma maka nlekọta nke DMAA bụ okwu ọnụ. Mgbe a na-eme otú a, ọgwụ ahụ ga-ewe ihe dị ka nkeji asatọ iji banye n'ọbara ọbara nke onye ahịa ahụ. Otú ọ dị, mmetụta ahụ agaghị adị ozugbo ozugbo ọtụtụ ọgwụ ọjọọ nwere ihe a na-akpọ ọkara ndụ. Nke a bụ oge achọrọ maka ọgwụ ahụ iji weghasị ma hapụ ihe ọ na-arụ ọrụ n'ime ahụ maka ojiji.
Ọkara ndụ DMAA gbasara 8 awa. Ya mere, onye ọ bụla nke na-ezube ịkwalite ahụ ya tupu oge mgbatị ahụ kwesịrị iji ọgwụ 8 mee ihe tupu ya enye oge zuru ezu iji tinye ọgwụ ahụ n'ahụ.
Mgbe o jiri ọgwụ ọjọọ mee ihe, enwere mmetụta zuru oke nke ịdị elu. Ọtụtụ mgbe, nke a abụghị mmetụta na ọtụtụ ndị ga-achọ inweta ihe niile n'oge ahụ karịsịa ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị mata oge ole ọgwụ ahụ ga-eji chụpụ ya n'ahụ mgbe ị gụsịrị ya.
Ná nkezi, a nọgidere na-aṅụ ọgwụ na ahụ maka ihe dị ka ụbọchị 24 nke na-agakwaghị enwe mmetụta ahụ.
Uru nke DMAA maka ụra na-agba
Eleghi anya, ị nụla ọtụtụ akụkọ na eziokwu banyere ikike nke DMAA na nhụjuanya dị arọ na ị ga-achọ ịmata nke n'ime ha nwere uche. Ọfọn, eziokwu nke okwu ahụ bụ na ihe mgbakwunye DMAA nwere ike inyere gị aka ịba nnukwu ibu dị iche iche.
Nke mbụ, mmezigharị Dimethylamylamine nwere ike inyere gị aka inwekwu nchekwube na mkpali ya ruo n'ókè ị na-amụba nkwụsị gị na ihe mgbu na ike. Ịbawanye ike na nhụjuanya mgbu ga-enyere gị aka imeri ọzụzụ nhụsie ike nke ọma.
N'ihe banyere nsị anụ ahụ, 1 3 Dimethylamylamine bụ otu n'ime ọkụ ọkụgenic abụba ọkụ. Dịka ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị na-ere ọkụ na-ere ọkụ, DMAA na-eme ka abụba dị ọkụ karịa ka ọ dị na mbụ na ikpe nke oke abụba na-agaghị adị.
Ị na-eche kedu ihe dmaa mere iji na-agba abụba n'anụ ahụ?
Ọfụma, DMAA na-eme ka ume gị dị ike, na-eme ka ị ghara iji ọbara gị mee ihe. Ọbara ọbara a na-egbochi na-akpata ọkpụkpụ azụ na nkwanye ahụ mgbu. Dị ka ndị dị otú a, mmụba nke metabolism na-abawanye, na-eduga n'ịba abụba anụ ahụ na ngwa ngwa karị.
Ihe owuwu nke DMAA, ephedrine na amphetamine na-ekere òkè nhata. Dị ka ndị dị otú ahụ, DMAA nwere ike ime ka usoro ihe nhụjuanya nke mmadụ na-eme ka mmadụ nwee ike ịhapụ norepinephrine. Ozokwa, ọ na-eme ka ndị na-anabata mkpụrụ na alpha beta na-emewanye ọrụ noradrenaline, ya mere na-akpali usoro mgbasa ozi adrenergic n'ụzọ pụtara ìhè.
Nchikota nke ma omume na - eduga n'inwe mmụba na ọnụ ọgụgụ nke anụ ahụ na oke ntụpọ nke anụ ahụ na - emepụta ume - a na - akpọ usoro a lipolysis.
Mmetụta nke DMAA nwere ike ibuwanye ma ọ bụrụ na ejiri ya na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali dị ka caffeine.
Ọ bụrụ na ejikọta ya na caffeine, mmetụta nke DMAA na ọnụọgụ na-arịwanye elu site na 35% ka ụda arụmọrụ abụba na-abawanye site na karịa 169%.
N'ime nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya iji nyochaa ịdị irè nke DMAA na abụba abụba, ndị 32 ndị toro eto na-etozi otu capsule nke mgbakwunye kwa ụbọchị maka ụbọchị 14 nwere nnukwu ụba abụba.
Mmetụta dị na DMAA
Dịka ọgwụ ọ bụla, DMAA nwere ike inwe mmetụta ụfọdụ ma ọ bụrụ na emegbu ya. Lee ụfọdụ n'ime ihe ga-ekwe omume Mmetụta mmetụta DMAA:
1. Ọbara ọgbụgba
Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe akaebe nke na-ejikọta DMAA ozugbo na ọbara ọgbụgba, enwere akụkọ banyere onye mepụtara ọnọdụ ahụ mgbe ọ na-aṅụ mmanya na-aba n'anya ma na DMAA. Otú ọ dị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ekwesighi iji DMAA mee ihe na mmanya ma ọ bụrụ na ọ ga-emetụta mmetụta dị otú ahụ.
2. Ọma mmerụ
Isi ọrụ nke imeju bụ iji nyocha ọbara ọbara digestive ahụ tupu ikwe ka ọ gafee n'akụkụ ndị ọzọ. E wezụga nke ahụ, imeju na-emetụta ọgwụ ọjọọ ma na-edozi ọgwụ.
Mgbe ị na-ewere mpi DMAA ma ọ bụ mgbakwunye, imeju ga-emeso ingredient nke ọgwụ / mmeju. N'ihi ya, imeju nwere ike ịnweta nkwalite ngwugwu nke enzyme bụ nke nwere ike ịmalite ịdị na-egbu egbu. Ọgwụ ahụ nwere ike ime ka ọnyá imeju nke nwere ike iji oge na-eme ka mmebi imeju na-adịgide adịgide.
3. Ọbara mgbali elu
N'iburu n'uche na ọ bụ ihe na-akpali akpali, Dimethylamylamine nwere ike ime ka ọbara mgbali elu. Dị ka ndị dị otú ahụ, ndị mmadụ na-arịa ọbara mgbali elu kwesịrị izere ịṅụ ọgwụ ma ọ bụ mgbakwunye nwere ya.
4. Obi mgbawa (obi arrhythmia)
Ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị, mmetụta dị mkpali nke DMAA nwere ike ime ka ọ daa ngwa ngwa ma nke a nwere ike ime ka obi na-esikwu ike maka ndị mmadụ na-ata ahụhụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịmepụtara ịwa ahụ, a dọrọ gị ọdụ ka ịghara iji DMAA izu abụọ tupu ụbọchị ahụ arụ ọrụ, ma ọ bụghị nke ahụ, mmụba ọbara mgbali elu na obi mgbagwoju anya n'ihi na ọgwụ ahụ nwere ike igbochi ịwa ahụ.
N'ime nnyocha e mere iji nyochaa mmetụta nke DMAA, nchoputa gosiri na 12 ndị okenye ahụ toro eto, onye ọ bụla n'ime ha meriri capsules abụọ nke OxyELITE Pro, ihe mgbakwunye ihe oriri nke nwere Dimethylamylamine, nwere mmụba nke obi na mgbatị ọbara.
Ka o sina dị, ndị toro eto asatọ nwere ahụike bụ ndị were 25 mg dose nke DMAA nwere nsogbu obi na ọbara mgbali ọbụna mgbe ha nụsịrị ọgwụ ahụ. Nke a na egosiputa na ọgwụ ahụ enweghi mmetụta ọ bụla na mkpụrụ obi ma ọ bụ mgbali elu ma ọ bụrụ na ọ na-eri ya.
5. Ntọhapụ nke Glaucoma
E wezụga inwe mmetụta na-akpali akpali, Dimethylamylamine na-ebukwa mgbagwoju anya nke arịa ọbara. Nchikota nke ihe abua ahu nwere ike ime ka onu glaucoma. Ya mere, ọ dị mma ka ị zere ịṅụ ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere glaucoma.
6. Mmebi mebiri
Enwekwara akụkọ banyere ikpebi imeju dịka ụda DMAA. Afọ ise gara aga, ndị 36 bụ ndị weghaara OxyELITE Pro, ihe mgbakwunye ihe oriri na DMAA dịka ihe nkwụsị, achọpụtara na ha nwere mmebi imeju. Otu n'ime ndị ọrịa nwụrụ mgbe mmadụ abụọ ọzọ jisiri ike na-adị ndụ mgbe a gbanwesịrị imeju.
O kwesiri iburu n'obi na ndi mmadu nile bu 36 na-ewere onu ogugu aro nke mgbakwunye ma 27 ha na-ewere otu mbipute DMAA nke mmeju. Ya mere, ọ naghị adị mfe ịmepụta mmanya na-egbu egbu na mgbakwunye ahụ.
7. Ọkpụkpụ Ntị
Ejikọtawokwa iji DMAA jikọrọ ọbara ọgbụgba. N'ikwu eziokwu, mmadụ atọ nwere ụfụ ụbụrụ mgbe ha jesịrị DMAA. Ka o sina dị, e guzobewo na ndị ahụ metụtara ahụ jiri ọgwụ na-aṅụ mmanya ma ọ bụ caffeine mgbe nile.
N'ime otu ikpe ahụ, onye ahụ nwere ahụ ike weere ihe a na-atụ aro maka mgbakwunye nri nke nwere Dimethylamylamine na mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ịrịa isi ọwụwa na-agbachi ụbụrụ.
8. Obi nkolopu
Enwere akụkọ gbasara nwoke 22 dị mma bụ onye mepụtara nkụchi obi mgbe o jiri Jack3d, ihe mgbakwunye nri nke nwere DMAA na caffeine maka izu atọ.
9. Ọgbụgbọ na vomiting
Otu nnyocha nyochaa mmetụta ndị dị na DMAA gosipụtara na 15% nke ndị 56 ndị natara ihe mgbakwunye nke nwere ọgwụ (OxyElite Pro) vomited na ahụmahụ ahụmahụ mgbe o nwesịrị ihe mgbakwunye. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe gosiri na ọ bụ DMAA na mgbakwunye nke mere ka ọgbụ na vomiting ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa.
10. Mgbaghara nwa oge
Ihe kachasị emetụta ya na iji DMAA bụ ụfụ nke ike ('crash') maka awa ole na ole mgbe ịṅụ ọgwụ. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'akụkụ a.
Akuku mmetụta ndị ọzọ nke DMAA gụnyere:
Iku ume ọkụ ọkụ
Ike na-egbu egbu
Ihe ụfụ (ọ bụ ezie na ọ dịkarịghị adị)
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime mmetụta ndị nwere ike ịdaba na DMAA. Ka o sina dị, ọ dịghị ọmụmụ ihe nke na-enyocha mmetụta dị iche iche nke ọgwụ ahụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime nchọpụta banyere ọgwụ ọjọọ ahụ gụnyere ihe nchịkọta nri na DMAA dịka otu n'ime ihe ha ji eme ihe kama ịṅụ ọgwụ ahụ. N'iburu n'uche na e mebeghị kpọmkwem usoro ọgwụgwọ dị na ntinye, ọ dịghị ezi nkwubi na ịchọta na mmetụta dị na ya sitere na DMAA. Ihe ndị ọzọ dị na mgbakwunye nwere ike ịbụ ihe kpatara nsogbu ndị ahụ.
E wezụga nke ahụ, na mgbe ụfọdụ, mmetụta ọjọọ kpatara ya site n'iji iji ngwaahịa DMAA eme ihe. A kọọrọ ụfọdụ n'ime ndị ọrụ ndị nwere mmetụta mmetụta ndị a na ha ewerela 1,000 mg kwa ụbọchị. N'ọnọdụ ndị dị otú a, enwere ike izere mmetụta ndị ahụ ma ọ bụrụ na otu osisi na-edozi usoro ziri ezi. Anyị ga-ekwurịta banyere DMAA ziri ezi na obere oge.
E wezụga nke ahụ, 1, 3 Dimethylamylamine enwewo mmetụta siri ike na usoro nhụjuanya bụ isi ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe na CNS na-akpali akpali ma ọ bụ ihe ndị na-emetụta usoro adrenergic. Nke a nwere ike ibute mmetụta dị iche iche. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ izere mmetụta ahụ, jide n'aka na ị gaghị ejikọta DMAA na stimulants ma ọ bụ nootropic.
Ọzọkwa, a na-atụ aro ka a ghara iji ihe mgbakwunye DMAA kwa ụbọchị. Ntre, nso idi uwụtn̄kpọ Dimethylamylamine?
Ntuzi dimethylamylamine ziri ezi dabere na ihe dị iche iche dị ka afọ na ọnọdụ ahụike nke onye ọrụ, n'etiti ọnọdụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ugbu a, enweghi ihe ọmụma sayensị zuru oke nke a pụrụ ịdabere na iji kwado usoro ọgwụgwọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị zụtara ngwaahịa DMAA maka abụba / arọ ọnwụ, hụ na ị gụrụ ma soro ntuziaka eji eme ihe na aha ya ma gwa dọkịta gị, ọkachamara ma ọ bụ onye ọ bụla ọkachamara nlekọta ahụ ike tupu i jiri ya.
Dị ka ọ dị, akara amalite nke DMAA sitere n'aka 10 mg na 20mg. Ma ọ bụ ½ ọrụ nke ngwaahịa DMAA nke nhọrọ gị. Nke a ga - enyere gị aka ịhụ ma chee otú ọgwụ ahụ ga - esi metụta gị ma ọ bụrụ na i jiri ya zuru oke.
Ka oge na-aga, i nwere ike iweli 40 ma ọ bụ 60 mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe àmà na-egosi eziokwu nke na-akwado usoro mgbasa ozi.
O yiri ka ha na-edozi ihe dị iche iche maka ngwaahịa ndị nwere dimethylamylamine. Ụkpụrụ ndị a na-enweta site na ndụmọdụ ndị ojiji nyere site n'aka ndị na-emepụta mgbakwunye DMAA ugbu a na ahịa.
I kwesịghị iji ngwaahịa DMAA kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta nsonaazụ kacha mma. Ihe ka ukwuu n'ime ihe mgbakwunye DMAA na-eri ha abụọ ruo ugboro atọ kwa izu na ọtụtụ. Site na iji mgbakwunye na ugboro ole na ole, ị na-ejikwa nlezianya zere ịzụlite ịdabere na ngwaahịa.
Mee nke ọma, jiri ọgwụ DMAA ma ọ bụrụ na ịchọrọ ume ma ọ bụ elele anya ma ọ bụ ihe dị ka 30 nkeji tupu ịmega ahụ. Site na ime nke a, ị ga-enwe ike izere ụfọdụ ihe mgbakwunye mmepụta mgbatị na mbụ.
Ihe kachasị mma kachasị mma n'ụwa bụ 4 kachasị ire ere
E nwere ọgwụ dịgasị iche iche nke na-enye aka n'ibu abụba site n'ịkwụsị inwe agụụ, na-eme ka mgbu ahụ na / ma ọ bụ ịnọgide na-enwe nri ziri ezi. Ọgwụ ọjọọ na-ere ọkụ pụkwara ime ka mmadụ nwekwuo ike ịgbatị ahụ site n'inwekwu ike ya na ilekwasị anya.
Tebụl na-esonụ na-egosi azụ ahịa anọ na-ere ọkụ na-ere taa gburugburu ụwa.
Aha ọgwụ ọjọọ na CAS Number Olee otú ọ na
Synephrine ntụ ntụ -CAS: 94-07-5 Synephrine ntụ ntụ bụ beta-agonist nke na-arụ ọrụ site na ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke mmadụ, ọnụ ọgụgụ calorie na ume ike
1,3-dimethylamylamine (DMAA ntụ ntụ) - CAS 13803-74-2 N'ihe na-eme ka Ephedrine dị, 1,3-dimethylamylamine bụ ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị ka ihe dị mkpa n'ime ihe oriri na-edozi ahụ iji nyere aka n'ịkwalite mmemme egwuregwu na maka ume.
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 E wezụga inwe ike na-ere ọkụ nke ọma, Clenbuterol hydrochloride nwekwara mmetụta thermogenic a na-akpọ site na ịmịnye ọbara mgbali ma na-akpali obi ịrụ ọrụ siri ike.
E wezụga nke ahụ, ọ na-eme ka glycogen daa, n'ihi ya, ọ bụ abụba ahụ.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 salbuterol uzuzu jiri ndi mmadu na-ene ume ma obu ọrịa obstructive na-adịghị ala ala iji mee ka ume ha dịkwuo mma. Otú ọ dị, n'oge a, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe iji kwalite ngwa ngwa nke abụba, maka mmezi ahụ na-achịkwa n'oge ọchịchị na-abaghị uru nakwa iji mee ka ntachi obi dịkwuo mgbe mmadụ na-arụ ọrụ mgbapụta abụba.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta dmaa ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ọgwụ ndị na-ere ọkụ na-ere n'elu, ị nwere ike ịme ya n'enweghị ihe ọ bụla site na AASraw, com.
1, 3-dimethylamylamine na-enye ọtụtụ uru gụnyere inyere aka maka mmelite nke ncheta oge dị mkpụmkpụ na ọrụ redio nakwa dịka ụlọ na ahụ ọkụ. Otú ọ dị, ị kwesiri ijide n'aka na ị gakwuru onye na-ahụ maka ahụike na-edozi ahụ ma na-agbaso usoro ọgwụ ahụ a tụrụ aro iji zere mmetụta ndị nwere ike ịnweta dịka ọbara mgbali elu, nsogbu obi na akụrụ, n'etiti ọrịa ndị ọzọ metụtara ahụike.
Ka o sina dị, ịrapagidesi ike na ụbụrụ ziri ezi abụghị nkwa na ị gaghị enwe mmetụta ọjọọ. Ozokwa, o kwesiri iburu n'uche na enweghi ihe omumu sayensi na ejikọta ihe ndi a na ozo iji DMAA nani; nke ahụ bụ, na enweghi ihe mgbakwunye ndị ọzọ.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - profaịlụ caffeine na 1,3-dimethylamylamine supplementation na ụmụ nwoke ahụike - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. a: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Feb 19.
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Ọdịdị nke ahụike na ọgwụ pharmacookinetic nke nchịkwa 1,3-dimethylamylamine na ụmụ nwoke - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. nke a: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, nke e bipụtara na 24 April 2014, nke emelitere ikpeazụ na 14 June 2018,
Vorce SP, et al. Dimethylamylamine: ọgwụ na-eme ka mkpụrụ ndụ amphetamines pụta. J Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Ihe ọzọ na-egbu ilu: ihe gbasara ọgwụ ọjọọ na ọgwụ ọjọọ DMAA. NZ Med J. (2010)
Lisi A, et al. Nnyocha nke methylhexaneamine na ntinye mmanụ etgeranium. Ọgwụ Nlekọta Ogwu. (2011)
Bloomer RJ, et al. Mmetụta nke 1,3-dimethylamylamine na caffeine naanị ma ọ bụ na ngwakọta na obi mgbali elu na ndị ikom na ndị inyom siri ike. Nkịtị Egwuregwu. (2011)
Onye na-emepụta MAGL na onye na-eme FAAH: JW-642 & OL-135 & PF-750
Ntụle miri emi nke Testosterone Cypionate The Top 10 testosterone ester: nke dị mma maka gị?
Stanozolol / Winstrol / winny ntụ ntụ